Iindlela ezona zihamba phambili zeMoto zeMelika
Iimoto neekhekhi Iikhuphe
Eyona ndlela ihamba phambili nge-Motorcycle Roads eMelika, # 15: i-Washington Rte. 129 ne-Oregon Rte. 3
ube-nn-y / Flickr
Ukukhangela imigwaqo ehamba phambili yemoto eMelika? I-American Motorcyclist yathatha amavoti kwi-website yabo ye-230,000 kunye neloluhlu lweendawo ezifanelekileyo zokugibela e-US
Bona ukuba uninzi kangakanani oye walukhwelisa kuloluhlu (ekukhuphuleni umyalelo wobuninzi), kwaye wabelane ngokukhethiweyo kwakho kwiindlela ezilungileyo eMelika!
# 15: I-Washington Road 129 kunye ne-Oregon Road 3, i-Clarkston, WA kwi-Enterprise, OKANYE
I-Pacific Northwest iyaziwa ngokuba yiendlela zokuhamba ngee stellar, kunye ne-85 miles elula ukusuka eCl Clarkston, eWashington ukuya kwi-Enterprise, i-Oregon inomsebenzi omncinci wento yonke: iinguqu ezibukhali kwi-Anatone yeBakala, iindawo ezihamba phambili kunye neentambo.
Indlela yokucwangcisa uhambo lokuhamba ngamathuthuthu
Indlela yokulungisa i-Emergency Kit yokuLwela
# 14: I-Ohio Road 170, iCalcutta ePoland
(CC BY-SA 2.0) nguDougtone
I-Ohio ayiyazi kakuhle ngeendlela zayo ezinyanzelisayo, kwaye abanye base-Ohio bathi i-Route 170 edibanisa iKalcutta ePoland ayiyona nto ibaluleke kakhulu kwilizwe, ngenxa yokuhamba kunye nokungahambi kakuhle. Oku akuzange kumise ekubeni wenze inombolo ye-14 kwi-AMA uluhlu, ebonisa ukuba kungenakulungeleka ukuba uhlala kuloo ndawo.
# 13: I-California Route 58, uMcKittrick ukuya eSanta Margarita
Ifoto © Basem Wasef
Ukwelula kweekhilomitha ezingama-71 zokuguqula i-alarmar-line i-tarmac iyanqumla ngeentaba zeCalin California ezinemibala yeengqolowa, zinikezela i-rollercoaster yokukhwela iinqwelo zokuhamba ngee-motorcyclists ezihamba ukusuka eLos Angeles ukuya kwi-Mazda Laguna Seca Raceway ye-MotoGP.
# 12: US Route 33, eHarrisonburg, eVirginia ukuya kuSeneca Rocks, eNtshona Virginia
CC BY-SA 2.0) nguDougtone
Awuyi kudideka ne-California Road 33 eyenza inyoka nge-Ojai, ukunyuka kweekhilomitha ezingama-65 kwendlela ehamba phambili ehamba ngeSandandoah Valley phakathi kweVirginia ne-West Virginia, enika iindawo ezintle zeentaba kunye nokujika.
# 11: Natchez Trace Parkway, ukusuka eNatchez, eMississippi, ukuya eNashville, eTennessee
I-Natchez Trace Parkway Bridge, ibonwa ngasentla. Ngombhali: Brent Moore - Umthombo: http://www.flickr.com/photos/brent_nashville/144460855/, CC BY 2.0, Isixhumanisi
Le ngqungquthela yama-444-miyela, indlela ehamba ngeendlela ezimbini ukusuka kwi-Mississippi, ngaphaya kwe-Alabama, naseTennessee. Kucingwa njengeSizwe seSizwe seScenic ngenxa yeempawu zayo zenkcubeko, imbali kunye nebonakalayo, i-Natchez Trace Parkway yenye yezona ndlela ezide kakhulu ezinokuthi zithandeke kwi-motorcycle.
# 10: I-Angeles Crest Highway, i-California Route 2
I-Angeles Crest Highway. Ifoto © David McNew
Intandokazi phakathi kwababini beedolophu ezihlala emagodini ngenxa yokusondela kweLos Angeles, iAlizabeth Crest Highway iinqaba ngeHlabathi leSizwe lase-Angeles kwaye lixhuma iLa Cañada, iFlintridge kwidolophu ye-ski yeWrightwood kunye nabaxhasi abakhulu kunye neenguqu eziphezulu.
# 9: I-US Route 12, iLolo Pass, i-Idaho ne-Montana
Ifoto © Comstock
Le ntaba ye-5233-foot-pass 40 miles ngaphandle kwe-Missoula, eMontha e-Idaho ne-Montana inemibono ebonakalayo imilambo, amahlathi ajikelezayo kunye nembali yembali ebuyela emuva kwixesha lika Lewis kunye ne-Clark Expedition.
# 8: California Road 36
IPascanic National Park. Ifoto © Nancy Nehring
Kucingwa ngabanye ukuba phakathi kweendlela ezilungileyo kwiCalifornia, eCalifornia Road 36 idibanisa i-Interstates 5 no-101 phakathi kwe-Red Bluff kunye ne-Hydesville kunye nechungechunge elide, elijikelezayo lezinto ezibonakalayo ezibonakalayo zenzelwe izithuthuthu. Kwaye ukuba oko akunako, unokuyilandela empuma ye-I5 ukuya kwi-National Park yaseLassen, ebonwa apha.
# 7: Cherohala Skyway, North Carolina kunye neTennessee
Ifoto © Adam Jones
Ebizwa emva kweemithi ezimbini zeSizwe - i-CHEROkee kunye ne-NantaHALA, i-Cherohala Skyway iqala eRobbinsville kunye neengqungquthela kwiintlaba zeentaba zaseNorth Carolina, zichithe kwiindawo ezisehlathini zaseTennessee ngaphambi kokuphela kwiTellico Plains, TN. Amafu kunye nenkungu ziyaziwa ukuba ziqhutywe kwiinyanga zasehlotyeni ngenxa yokuphakama kweendlela (ngokukodwa kwi-North Carolina side), kodwa abagibeli bafunga ngeendawo eziphefumlelweyo ze-Cherohala Skyway.
# 6: Ukuhamba ukuya kwi-Sun Road, iGlacier National Park, Montana
Posnov / Getty Izithombe
I-Road-to-Sun-Road yindlela ephela yokunqumla kwiPlabathi yeSizwe yeGlacier enhle kakhulu, kwaye iinguqu zayo ezinzulu kunye neendawo eziphakamileyo zenza ukuba zikhohlise kakhulu kwiinyanga ezibusika. Ebonakala ngokulandelelana kokuqala kwefilimu ethi Shining , amancinane amancinci anikezela ngolu hlobo lwamabala kunye neembono ezintle.
# 5: I-California Route 1, i-Pacific Coast Highway
Iithuthuthu eziwela iBixby Bridge, iPacific Coast Coast, i-Big Sur. Pgiam / Getty Izithombe
I-Pacific Coast Highway (okanye i-PCH) isebenza ukusuka kwi-Southern County yase-Orange County ukuya kuMntla-California waseMendocino County, kodwa isalathiso sayo esona saziwa kakhulu sisiqendu se-Big Sur phakathi kweSan Simeon neKarmele. Nangona ikhutshwe ngeemoto eziqashisayo ezihamba ngokukhawuleza ngexesha leeyure eziphambili, lo mgwaqo omkhulu unxweme unomnye wezona zihamba ngokugqithiseleyo kwihlabathi, kungabi yi-US
# 4: Umzila 550, "I-Million Dollar Highway" ukusuka e-Ouray ukuya eDurango, CO
Ifoto © Joe Sohm
Uya kufuna ukunqumla le nto xa ukwesaba izinto eziphakamileyo: US Route 550 isebenza ngokugqithiseleyo kwiintaba ezinqabileyo kunye neenkonyane ezinqabileyo, ezininzi zazo ezingaphazanyiswa zizikhuselo. Inqanawa yeColorado idonsa abaninzi abantu abahamba ngee-motorcyclists, ngakumbi abakhweli .
# 3: US Route 129, aka "Umsila weligo"
Ngaphandle kokugqithisa okungapheliyo kunye nokuphindaphindiweyo komthetho wokuchithwa komthetho, Umsila weNyoka uhlala phakathi kweendlela ezidumileyo zezithuthuthu ngenxa yezizathu ezifanelekileyo: nokuba zii-11 iiekhilomitha ubude, ukuguqulwa kwayo okungama-318 kunokubonelela ngokuzonwabisa okungapheliyo kuyo yonke imicimbi yabaqhubi bee-motorcyclists, ukusuka kubagibeli bezemidlalo ukutyelela abanomdla.
# 2: iBlue Ridge Parkway, eNorth Carolina
I-Linn Cove Viaduct - I-Milepost 304 kwi-Blue Ridge Parkway. Ifoto ifumaneka ngeNkundla yeSizwe yeNkonzo ye-US
Ngenxa yokulinganisa kunye neendawo ezahlukeneyo, kunzima ukubetha i-Blue Ridge Parkway eyi-469-mile. Ukwandisa eVirginia naseNorth Carolina ikakhulukazi kwiintaba eziphakamileyo zeBlue Ridge, oku kukukhangela kakhulu kwi-US National Park System ngenxa yendlela ehamba ngayo ehamba phakathi kwezona zimbono eziphefumlelweyo kwilizwe. Kodwa ke, ngokukhawuleza, kufuneka baqaphele: umda wokukhawuleza awunakudlula 45 mph kwaye uncinci kwiindawo ezininzi.
# 1: Beartooth Highway, Montana kunye ne-Wyoming
I-Carol Polich Iifoto zeefoto / i-Getty Izithombe
I-US Highway 212-- aka, i-Beartooth Highway- idibanisa i-Red Lodge kunye neCooke City, Montana, kunye ne-11,000-foot foot incit (can not be punctuated). Kodwa le ndlela i-zigzagging iyanqumla ngokusebenzisa iHlabathi leSizwe leCuster kunye neHlabathi leSizwe lase-Shoshone, linika ezinye iindawo zokuvula amehlo kwi-planethi. Mhlawumbi inxalenye engcono kakhulu ye-Beartooth Highway kukuba xa usuphelile ugibela iindlela zayo ezicelomngeni, kuya kukukhokelela ngqo kwisango le-northeast of Parkstone National Park. Kodwa khumbula ukuba uhlale ufudumele xa uhamba apha: kungabanda kakhulu kule ndawo.
Iibhayisikili eziphezulu ze-17 ezivela kwi-EICMA ye-Motorcycle Show
Ukuqalisa: Amanyathelo okuQala ukuPhuthukisa ngeSithuthuthu
Oko Kufuneka Ukwazi Ngo-AMA Pro Flat Racing Racing
Indlela yokwenza iBhayisiki Yakho yohlobo lwezothutho
Iziseko zeSithuthuthu: Ukukhetha iBhayisike kwiRide Your First Ride
Hlalani Mkhulule kwaye niyitshise ukushisa ngeSithuthuthu
Izinto ezili-10 ezenziweyo kwiveki ye-Daytona Bike
Ingaba le Nqununu yePoriti yexesha elizayo lokumiselwa kwamathuthuthu?
Imibuzo Eqhelekileyo: Indlela Yokuhlala Ufudumele Ngesithuthuthu
Yenza ii-Acrylic zakho zibe yimbobo yePaint
Ukwahlukana phakathi koSikole soMthetho kunye no-Undergrad
Funda ngokuqhelekileyo ngeYep Hurricane Concept
UBuddy Holly Ufa kwiClane Crash, ngo-1959
Liyiphi iVeki yamaFrentshi kwaye Utsho njani?
Ukutya KokuKhisimusi Okungeyona Inetyhefu
Yintoni uRockabilly Music?
Indlela Yokubhala Ingxelo Efanelekileyo Yengcaciso
Ndiyazi njani iAngeloel Zadkiel?
Uvavanyo lokuSebenza koMgangatho weMichiza
Ukukhetha Ubungakanani obufanelekileyo Phakamisa i-Vehicle 4WD yakho
Amanqanaba okuSebenza: Inkcazo kunye nemizekelo
Ama-Aryats (iivesi) ezivela kwiQuran kwi-Prayer Prostrate
Indlela i Geysers isebenza ngayo
Yintoni iSt. Petersburg Paradox?
Iingoma eziphezulu ze-Rap Rap ka-2013
Iindlela ezili-10 zokufumana i-Free okanye i-Cheap E-Books
Ngaba iNtloko yoBuququzeleli ngabanye ihleli ngokufutshane?
I-Cinderella Ballet: I-Synopsis ye-Cinderella Ballet - uMthetho 1
Abaxhasi, i-Notonectidae yaseNtsapho
Ukudibanisa u-Liegen (ukuya kuxoka, ukuhlaziya, ukuphumla) kuzo zonke iixesha
Ordenes de Trump sobre deportaciones, i-refugiados y más